भदौ ६, काठमाडौं (अस) । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक साधारण सभा असोज १ गते गर्ने भएको छ । कम्पनीले वार्षिक प्रतिवेदन पारित, लेखापरिक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण लगायतको विषयमा छलफल गर्न सभा बोलाएको हो । साथै , निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उपयुक्त कम्पनीसँग गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलार्य प्रदान गर्ने प्रस्ताव समेत सभाका लागि तय भएको छ ।
सभा अग्रवाल भवन, कमलपोखरी, काठमाडौंमा दिउसो २ बजे शुरु हुनेछ । सभा प्रयोजनका लागि कम्पनीले भदौ २२ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने बताएको छ । बुक क्लोजको आधारमा सभामा भाग लिन भदौ २१ गतेसम्म शेयर कायम गर्नुपर्नेछ ।
यस वर्ष कम्पनीले लाभांश भने दिएको छैन । कम्पनीले बीमा समितिले तोके बमोजिम रू. १ अर्ब चुक्तापूँजी कायम गरिसकेको छ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ४ करोड २९ लाख ४८ हजार छ । गत असार मसान्तसम्म कम्पनीले रू. ६ करोड ८ लाख ६ हजार खुद नाफा गरेको छ । गत वर्ष ८७ हजार ८८६ बीमालेख जारी गरेको कम्पनीले रू. ८१ करोड १८ लाख १७ हजार बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । यस कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ५ दशमलव ८३ रहेको छ ।
एनआइबिएल प्रगति फण्डको नाफा १० करोडभन्दा बढी[२०७६ फागुन, १४]